News - Codsiga Dhalada la Isticmaalay ee Dhalada Dhalada / Soosaarka Weelka
Codsiga Dhalada la Isticmaalay ee Dhalada Dhalada / Soosaarka Dhalada ah
---------------------------- Dhalooyinka quraaradaha la isticmaalay - QIIMO dib u warshadeyn
Waa maxay muraayadda la isticmaalay?
Muraayadaha la isticmaalay waxaa loo gudbiyaa baakadaha dhalada ah ee aan la isticmaali karin, qalabka dhismaha ee la tuuray iyo galaaska maalinlaha ah. Sida dhalooyinka sharaabka la tuuro, dhalooyinka wax kara, dhalooyinka khamriga, iwm.
Maxaa loogu baahan yahay muraayad la isticmaalay soo saarida dhalooyinka quraaradaha?
Soo saarida dhalooyinka dhalada waa mid ka mid ah badeecadaha baakadeynta tamarta badan, waana mid aad u qiimo badan soo kabashada iyo isticmaalka. Sida dib loogu warshadeeyo baakadaha dhalada si macquul ah waa mowduuc kulul oo loogu talagalay cilmi baarista gudaha iyo dibedda.
Ku darida qadar ku habboon culimada alaabada ceeriin waxay waxtar u leedahay soo saarida muraayada, maxaa yeelay kiliyaha waa lagu dhalaali karaa qoyaan ka hooseeya alaabta kale ee ceeriin. Sababtoo ah dib-u-warshadaynta dhalooyinka dhalada waxay u baahan tahay kuleyl yar, iyo xirmooyinka jirka ee foornada sidoo kale waa la dhimi karaa。
Nidaamka qaaska ah waa ka hor-socodsiinta dhalooyinka quraaradaha ee la soo helay, sida bilaabista kala-soocidda, nadiifinta, iyo kala-sooca midabka.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in soo saarista dhalooyinka quraaradaha ah, isku darka 30% ee cullet ay tahay tan ugu haboon, sidaas darteed waxay sidoo kale kordhin kartaa heerka isticmaalka muraayadaha dib loo warshadeeyay waxayna xoojineysaa ilaalinta deegaanka.
Waqtigan xaadirka ah, warshadaha dhalada dhalada badankood waxay isticmaalaan 20% dhalada geedi socodka soo saarida dhalooyinka quraaradaha si kor loogu qaado dhalaalka iyo isku darka ugu wanaagsan ee alaabta ceyriinka ah sida quartz sand, feldspar iyo alkali.
Dabcan, waxa ku jira muraayadda jaban waxay saameyn ku yeelan doontaa qiimaha wax soo saarka, midabka maaddada iyo qiimaha dhalada dhalada ah.
(1) Si sax ah u dooro si aad uga saarto wasakhda
Waa lagama maarmaan in laga saaro wasakhda sida birta iyo dhoobada soo kabashada dhalooyinka dhalada ah. Tani waa sababta oo ah kuwa soo saara weelka dhalada ayaa u baahan inay isticmaalaan waxyaabo nadiif ah oo nadiif ah. Tusaale ahaan, daboolida biraha ee burjikadu waxay noqon kartaa oksaydh wax u dhimaya howlaha foornada; dhoobada iyo walxaha kale ee ajaanibta ah ayaa cillad ku ah soo saarista konteynarrada.
(2) Xulista midabka
Soo kabashada isticmaalka midabka sidoo kale waa su'aal. Maaddaama muraayadda midabka leh aan loo isticmaali karin soo-saarista muraayad dhalaal aan midab lahayn, oo keliya 10% oo ah cagaar ama muraayad bir ah ayaa loo oggol yahay in loo isticmaalo soo-saarka muraayadda amber, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo foosha ama mashiinka si loo midabeeyo muraayadda jabtay. dooro. Haddii dhalada jabay aan si toos ah loogu isticmaalin xulashada midabka, waxaa kaliya loo isticmaali karaa in lagu soo saaro weelal quraarad fudud oo cagaar ah.
Troy waa Dhalada & baakadaha iyo xirnaanshaha qaraabada alaab-qeybiye, degmo ku taal Shiinaha.
QAARADA® ayaa soo saarida dhalada & baakadaha dhalada in ka badan 10 sano. Waxaa jira in ka badan 3,000 dhalo dhalo ah, dhalooyinka quraaradaha ah iyo xirmooyinka laga bixiyo internetka. Waxaan sidoo kale kuu sameyn karnaa adiga, iyada oo aan loo eegin caaryada cusub ama daabacaadda, calaamadaha calaamadaha.
Waan heli karnaa, qaabeyn karnaa, ka soo saari karnaa, ka yeelnaa, ka rarnaa, ka kaydsanaa, iyo inbadan.
Maaddaama ay tahay soo saare xirfadle ah Dhalada Dhalada Dhalada ah iyo Daboolka Shiinaha, sida a warshad weyn oo Jar Jar ah, waxaan hubaal leenahay baakado waaweyn oo kala duwan oo aad ku dooratay.
Waxaan sidoo kale bixinnaa qaab / naqshad / mug kale oo loogu talagalay cabitaanka Boba, qaar ka mid ah alaabada iibinta kulul ee macluumaadkaaga!
WAXYAALAHA TAYADA UGU FIICAN】 - Dhalooyinkaas jasiiradda ah ee ka samaysan maadada muraayadda heerka fasalka.BPA Daboolka bilaashka ah iyo kuwa madow ayaa ah sheybaar la xaqiijiyay oo ah walxaha u adkaysta daxalka u adkaysta-caddeyn ku habboon abaabulka goobtaada iyo bakhaarkaaga. Keydso qalabkaaga oo jikadaada ka dhig mid nadiif ah oo ammaan ah
【Caafimaadka iyo Dulqaadka These - Afka gasacadaha dhalada ah waxaa loogu talagalay Thread, kaas oo bixiya shaabad hawo adag leh si loo ilaaliyo cusub ee waxyaabahaaga cuntada, Laakiin intaas ka sokow, waxaad si sax ah u ogaan kartaa waxa ku jira weelka buskudka adiga oo aan jaleecin daboolka. Naqshadeynta sagxadda hoose waxay leedahay shaqo caddayn ah si ay u hubiso meelaynta miiska
SE BULSHADA BIYAHA & SIRTA AIRTIGHT, OO LOO SAMEEYO SI FUDUD】 - Weelasha malabku waxay ku weyn yihiin qabashada cabitaannada, macaanka, malabka, ama cuntada ilmaha; Daboolida biyaha aan fiicnayn nd & daboolida badbaadada ayaa kufiican qashin qubka & qubayska biyaha kulul. sidoo kale aad ugu fiican DIY dhalooyinka quraaradaha magnetic leh dabool
* Dhalooyinka dhalada ah oo tayo sare leh oo leh daboollo lacag ah - Weelka dhalada ah ee birta ah oo leh dabool lacag ah, kaas oo ka samaysan alaab tayo sare leh oo loogu talagalay cimri dherer iyo u roonaanta ugu badan.
* BPA Bilaash ah & Cunto badbaado leh - BPA Bilaash ah 100% muraayadaha darajada cuntada leh iyo weelka dhaqa oo nabdoon. Daboolka qalinka waa shey shaybaar leh oo shey u adkaysta daxalka
Dhalooyinkaan yar-yar ee dhalada ah waxay garaaci doonaan xaflad kasta, isu imaadaan ama aroos. Qaab qaboojiyaha casriga ah ee casriga ah ee qof walba jecel yahay. U isticmaal cabitaanno, darbo, ixtiraam xaflad, farshaxanno, uunsi, shumacyo ama wax kastoo aad ku riyoon karto.
VERSATILE & MULTIPURPOSE: Qaabkan guridda, soo jiidashada leh, dhalooyinka jelly ayaa ku habboon hadiyadaha qubeyska. Samee Hadiyad Fikir leh oo Lagu Kaydiyo kaydka, xawaashyada, Jams, shumaca, ama Honey - Ku qurxin Xarig, Ribbo, Qaansooyin, ama Twine si loo Abuuro Mid Fadliga Arooska Noocee Ah.
BPA Bilaash ah 100% muraayadaha darajada raashinka ee aaminka ah iyo weelka weelka lagu dhaqo. Af wareegsan oo dabacsan iyo dabool daboolan ayaa dhibco dheeri ah ku daraya dhalada dhalada ah. Lids Silver waa shey shaybaar leh oo shey u adkaysi u leh Heerarka Badbaadada Fasalada Cuntada.
* Daboolka Baasaboorka Dib loo Isticmaali Karo Daboolka Jar Masonka leh Dalool Caws
* Dusha sare ee bamboo waa mid aan sun ahayn, xoogan, adkeysi leh oo qurux badan
* Iyada oo leh dhexroor 15mm dalool caws ah, oo ku habboon caws kasta oo ka yar 13mm
* Iyada oo gasketka silikoon lagu xidho ayaa si sax ah usameyn doona weelka, dhibaato malahan baxsiga
* Waxay ku habboon tahay weel caw af ah oo caadi ah ama ballaaran iyo dhalooyinka qasacadaysan oo si fiican u habboon
* Daboolka Bamboo leh Silicon Ring - Way ka duwan tahay daboolka kale ee balaastigga ama birta birta ah, daboolka weelka dhalada ee bamboo wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo dabiici ah oo saafi ah Waxaa laga soo qaatay baasaboor dabiici ah oo koray, daboollada bambooyinkani waa kuwo fudud, oo aan si fudud u liidan. Giraanta silikoon ee furi kara waxay si fudud ugu habeyn kartaa weel bir ah af kala duwan oo si sahlan loo nadiifin karo. . Nadiifi oo qalaji markasta kadib markaad isticmaasho si aad uga fogaato caaryada.
La xiriir Troy si aad u hesho tijaabooyin bilaash ah !!!
Email noo soo dir!